ချစ်သူ ရိုက်ပေးတဲ့ အလန်းစားပုံတွေကိုတင်ထားတဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး
ချစ်သူ က ရိုက်ပေးတဲ့ အလန်းစားပုံတွေကိုတင်ထားတဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး
19 Apr 2018 . 4:37 PM
အဆိုတော်သရုပ်ဆောင်ဝါဆိုမိုးဦး ရဲ့ အလန်းစားပုံတွေကို သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်မှာ “နှစ်သစ်မှာ ပုံအသစ်တွေ တင်ပြီကွယ်” ဆိုပြီးတော့ တင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ အဲ့လိုကမ်းခြေရောက် အလန်းစားပုံတွေကိုတော့ ချစ်သူက ရိုက်ပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်း ဝါဆိုမိုးဦး က ဖော်ပြထားပါတယ်။
ချစ်သူရိုက်ပေးတဲ့ ပုံတွေ နဲ့ လန်းနေတဲ့ ဆိုဆို
Snare အဖွဲ့ က အဆိုတော် ဖြိုးလေး နဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး တို့ဟာ မေတ္တာမျှနေကြတာဖြစ်ပြီး ဝါဆို က သူမဘဝ အတွက် လက်တွဲဖော်ကို ရွေးချယ်တဲ့ နေရာမှာဒီလိုအချက်တွေကို ဦးစားပေးတယ်ဆိုပြီးဧပြီလဆန်းပိုင်းလောက်က တင်ထားတာကို တွေ့ဖူးပါတယ်။
“ဝါဆို့ အတွက် “ယောင်္ကျားကောင်း”ဆိုတာ… ဝါဆို့ ကို အရမ်းချစ် အရမ်းဂရုစိုက်ရမယ်… သစ္စာလည်းရှိရမယ်… သစ္စာရှိဖို့တော့အရမ်းအရေးကြီးတယ် Relationship တစ်ခုမှာ အချစ်ကော သစ္စာတရားရောရှိမှာသာ ကြာရှည်တည်တံ့နိုင်တယ်လို့ ဝါဆို ကတော့ယူဆတယ်… ချစ်ချစ်တို့ရော ဘယ်လိုလဲ? ❤” ဆိုပြီး ဝါဆိုမိုးဦးက ပရိသတ်ကို မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
Photo Credit:Warso Moe Oo Facebook